Tsidiho ny Tendrombohitra Fuji | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny Tendrombohitra Fuji
Ny mariky ny Japana is the Tendrombohitra Fuji. Izay mpankafy manga, anime na sinema japoney mahalala azy ary izay te hitsidika ny firenena dia misy an'io angano tendrombohitra eny an-dalana. Ary mendrika ny manakaiky kokoa ny fahitana azy akaiky, ny fiakarana ny tehezany, ny fitsangantsanganana an-tongotra na mankafy ny fiadanan'ny tendrombohitra fotsiny.
Izany no antony hiresahantsika anio ny iray amin'ireo tendrombohitra malaza manerantany: ny tendrombohitra Fuji manaitra.
1 Tendrombohitra fuji
2 Tsidiho ny Tendrombohitra Fuji
Amin'ny fitsipika dia ilaina ny milaza an'izany Izy no tendrombohitra avo indrindra any Japon miaraka amin'ny haavony 3.776 metatra. Ho fanampin'izay, izy no tendrombohitra avo indrindra faharoa any Azia miorina amin'ny nosy. Momba ny a volkano mavitrika na dia teo am-piandohan'ny taonjato faha-XNUMX aza ny fipoahana farany.
Ny Fujisan, araka ny iantsoan'ny Japoney azy, dia vitsivitsy monja zato kilometatra miala an'i Tokyo Ary raha tsara vintana ianao mijanona ao amin'ny tranobe avo, amin'ny andro mazava dia ho hitanao izany avy ao amin'ny efitranonao. Ny hatsaran-tarehiny dia mitoetra ao amin'ny fijoroana tsy manam-paharoa amin'ny haavony mahavariana ary tendrombohitra tonga lafatra izy io, kônera simetrika iray avy amin'ny fijerinao azy fa efa ho ny antsasaky ny taona no rakotra lanezy feno tendro.
Nanomboka tamin'ny 2013 dia Lova Iraisam-pirenena fa talohan'ny nidirany ho ampahany lehibe teo amin'ny firenena, ny Tendrombohitra Masina telo, miaraka amin'ny Tendrombohitra Haku sy ny Tate Tate. Ny tendrombohitra dia voahodidin'ny farihy dimy izay tena tanjon'ny mpizahatany ankehitriny: Lake Kawaguchi, Yamanaka, Mototsu, Sai ary Shoji ary Ashi. Mahafinaritra ny fomba fijery avy amin'ireny rano ireny.
Azontsika atao ny manomboka amin'ny zava-manintona an'io tendrombohitra io ihany: Station Subashiri, Fujinomiya, Station Subaru Line 5, Fujiten Snow Resort, Station Gotemba 5 ary Yeti Snow Town. Raha ny marina misy gara miisa folo, ny iray eo am-pototry ny tendrombohitra ary ny fahafolo eo an-tampony, fa ny lalana asphalt dia miakatra hatramin'ny 5 ary eto misy gara miisa dimy miorina amin'ny sisin'ny tendrombohitra. Ilay dimy nolazaiko tetsy ambony.
La Station 5 Subashiri dia eo amin'ny lemaka atsinanana amin'ny Tendrombohitra Fuji ary Iray amin'ireo fidirana mora indrindra mampiasa fitateram-bahoaka avy any Tokyo izy io. Tsy toeram-piasana mandroso be io ary misy toeram-piantsonana, trano fidiovana ary fivarotana sy trano fisakafoanana roa ihany. Tsy misy hidim-baravarana ary raha manana fiara ianao dia misy làlana mankeny eto nefa mikatona mandritra ny fotoanan'ny fiakarana, izany hoe ny 10 Jolay ka hatramin'ny 10 septambra, izay rehefa be ny bus.
Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny Làlana Subarishi izay mitondra anao hamaky ny ala. Tsy dia misy olona firy satria malaza kokoa ny làlan'ny tendrombohitra hafa. Ny fiakarana dia maharitra adiny dimy ka hatramin'ny valo ary ny fidinana dia maharitra adiny telo ka hatramin'ny dimy hatramin'ny haavon'ny 1950 metatra. Raha te-handeha tsy dia mandeha ianao dia afaka miakatra amin'ny tampon'isa hafa, ny Kofuji Peak na Little Fuji, izay tratra rehefa avy nandeha 20 minitra avy teo amin'ny Station namaky ny ala.
La Station 5 Fujinomiya Io no gara faharoa malaza sy mandroso indrindra amin'ireo gara Fuji. Mora idirana izy io ary afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny JR Tokaido shinkansen ary avy eo ny bus. Manana toeram-piantsonana, fivarotana, trano fidiovana ary trano fisakafoanana be dia be izy io. Any amin'ny haavon'ny 2400 metatra izy ary manolotra ny lalany manokana ihany koa, ny Lalan'i Fujinomiya, ny lalana fohy indrindra mankany amin'ny Tendrombohitra Fuji. Ny fiakarana dia eo anelanelan'ny efatra sy fito ora ary ny fidinana dia eo anelanelan'ny roa sy enina.
Misy tendrony an-tampony koa eto, ny Hoeizan, miaraka amin'ny fahitana lavitra an'i Tokyo na ny Oseana Pasifika. Misy koa ny Fuji Subaru Station 5 de no malaza indrindra ny rehetra ary ilay manana fidirana tsara indrindra avy any Tokyo. Azo zahana amin'ny ankamaroan'ny taona izy io ary mora azo amin'ny alàlan'ny Subaru Line, làlambe iray izay miakatra mankany Fuji avy ao amin'ny tanànan'i Kawaguchiko. Ankoatr'izay, satria eo amin'ny 2300 metatra ny haavony, dia manana fomba fijery tena tsara momba ny tontolo izy io.
Avy eo koa ny Gara Gotemba, amin'ny 1400 metatra ary tsy voavolavola, ary ny Fujiten sy Yeti ski Resorts, kely kokoa izy io. Ankehitriny, betsaka ny olona miandry ny fotoana hanokafana amin'ny fomba ofisialy satria tena zavatra tsy hay hadinoina io.
Ny vanim-potoana ofisialy dia manomboka amin'ny Jolay ka hatramin'ny Septambra izay rehefa tsy misy oram-panala amin'ny ankapobeny ary misokatra ny fialofana. Misy Japoney ary maro koa ireo mpizahatany vahiny ka raha tsy tianao ny vahoaka marobe dia ialao ny Herinandron'ny Obon amin'ny tapaky ny volana aogositra izay malaza be.
Y Raha tsy te-hitsangatsangana na hianika an'i Fuji ianao, inona no azonao atao? Tsidiho ireo tanàna manodidina ary mankafiza ny farihy. Araka izany, misy Fuji Lakes, Hakone y Fujinomiya. Ny Farihy Fuji dia eo amin'ny farany avaratry ny tendrombohitra. Nandeha andro vitsivitsy aho Kawaguchiko ary faly be aho. Tonga tamin'ny fiara fitateram-bahoaka avy any Tokyo aho, nijanona tao amin'ny hotely super onsen izay manatrika ny farihy, nanofa bisikileta aho ary reraky ny familiana, niakatra tamin'ny Tendrombohitra Tenjo tamin'ny alàlan'ny ...
Afaka mahita farihy misimisy kokoa ianao fa any dia tsy afaka mandeha bisikileta intsony ary mety ny manofa fiara. Handeha telo andro aho ka tsy mendrika izany. Ny torohevitro dia hoe raha te hanao bebe kokoa ianao na fanindroany ao amin'ny Fuji dia aza hadino ny mitsidika an'i Hakone.
Hakone dia ao amin'ny valan-javaboary Fuji Hakone Izu, latsaky ny zato kilometatra miala an'i Tokyo. Toerana malaza be io ary atoro anao ny mandeha mandritra ny roa andro, tsara kokoa ny telo na efatra. Matetika ny mpizahatany no manao a fitsangatsanganana antoandro fa raha ny marina dia laninao amin'ny fomba fitaterana izany ary tsy mankafy na inona na inona ianao. Misy samy hafa mandalo fizahan-tany hanararaotra ny zava-drehetra ary izany no maha-zava-dehibe ny manapa-kevitra ny faharetanao.
El Circuit Hakone no ataon'ny tsirairay. Mampifandray ny Station Souzan, ny fiafaràn'ny lalamby Hakone Tozan, miaraka amin'ny Station Togendai amoron'ny Farihin'i Ashinoko miaraka amin'ireo fijanonana ao Owakudani sy Ubako. Ity fitsidihana ity dia rakotry ny Hakone Free Pass ary tsara tarehy ny fitsangantsanganana satria fahitana tendrombohitra, lanitra, fumaroles, ala ianao ... Maharitra adiny dimy eo ho eo vao vita ny fitsidihana manontolo, izay mety hiafara amin'ny fandehanan'ny sambo piraty eny amin'ny farihy.
Inona no atoroko? Mijanona eo amin'ny iray amin'ireo gara eo anelanelany any, misy ryokans, fonenana nentim-paharazana tsara tarehy, ary manao io dia io amin'ny andro hafa miaraka amin'ny fotoana bebe kokoa. Izany hoe, tonga avy any Tokyo ianao, mandray ny fiara tariby, mivoaka amin'ny gara izay ijanonanao, miala sasatra, mandeha, mandeha ary ny ampitso dia manohy ny fizaran-tany ianao. Heveriko fa tsara in'arivony tsara kokoa noho ny miaraka manao ny zava-drehetra ao anatin'ny iray andro. Ny vidin'ny HFP dia avy amin'ny Shinjuku 5140 yen mandritra ny roa andro ary 5640 mandritra ny 3 andro. Raha mividy ny pass amin'ny faritra ianao, any Odawara, ny vidiny dia 4000 yen mandritra ny roa andro ary 4500 mandritra ny telo andro.
Ireo vidiny ireo dia hatramin'ny 31 martsa 2019, manomboka amin'ny volana aprily dia miakatra hatramin'ny 5700/6100 ary 4600/5000 yen. Heveriko fa ny fitsidihana ny faritra Mount Fuji dia tena soso-kevitra tokoa rehefa misy mitsidika an'i Japon. Tokyo dia mahafinaritra, fa ny mahita an'io perla ny hatsarana voajanahary zato kilaometatra miala eo io dia manome fankasitrahana. Aza mitsahatra manao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Tsidiho ny Tendrombohitra Fuji